Forum serasera malagasy fahadiovam-piaina - hygiene de vie - Dinika forum.serasera.org
fahadiovam-piaina - hygiene de vie
Fitohizan'ny hafatra : fahadiovam-piaina - hygiene de vie
rhaj0 - 23/12/2016 14:51
Ny dokotera falehako aty Kanada, dia... miezaka ny TSY hanome fanafody mihintsy. Rahefa marary, dia hoz'izy izay : "c'est normal". Izany hoe, toa hoe "lalam-piainana" ny aretina. Ary dia, toa ny hoe, mandeha "normal" koa ny fahasitranana. TSY mila fanafody. Ny averimberiny, dia "fahadiovam-piaina" (hygiene de vie). Rahefa "madio fiaina" ianao, dia mitsinjo/misoroka (prevention), ary koa manarina miadana (traitement) izay tsy mety eo.
Ka ilay "fahadiovam-piaina" dia
1- miaina tsara, mifoka rivotra madio, mifoka rivotra feno (respiration profonde). Satria, rahefa tsy ampy oksizena, dia be gaza karibonika, nefa ny CO2 dia mampalasa asidra ny tontolo (milieu). Ary ny tontolo asidra dia sompitra ho an'ny aretina, indrindra ny homamiadana.
2- misakafo tsara. Ahena ny sira, siramamy, matavy; tsy mibosesika raha iray, fa atao isan-karazany ny sakafo. Ajanona ny sigara sy alikola. Misotro rano.
3- dia ahena ny rotoroto (stress), fa alaivo miadana ny fiainana
4- dia manao fanatanjahan-tena, na dia mandeha tongotra fotsiny aza, na hoe, manenjana ny vatana (etirement). Raha mahavita meditation (yoga sns...) dia vao mainka tsara, sady mampihena ny rotoroto koa izany.
rhaj0 - 03/01/2017 13:51
miampy iray ity, indrindra t@ fety teo izao dia niari-tory daholo tao, fa...
5. mila atao ampy tsara koa ny torimaso. Io mantsy, raha tsy ampy, dia lasa mitady raha ny vatana, dia te-hisakafo lava, ary io ilay lasa mampatavy. Fa ny tena olana @ tsy fahampiana torimaso, dia ny fitadidiana na koa ny asan'ny ati-doha @ ankapobeny no sahirana.
Dia mazava ho azy fa ilay "fahadiovam-piaina" dia midika ny fahadiovan'ny vatana, sasaina madio ary atao maina, na tanana io na tongotra, h@ lavaka (orona, sofina,...) sy izay elakelaka (helika, laferana,...) rehetra eee....